Wheel saga mukwende saizi -Nhau-Phu Ly Bao Co. Ltd.
Wiricheya mukwende saizi gwaro
Izvi zvidimbu zvakanaka kune vanhu vari kutsvaga diki, mavhiri mukwende kuti vatakure mundege. Mazhinji mavhiri totes anokwana pasi pechigaro, uye zvidiki zvakakwana kuti zvinokwenenzvera nyore mukati nekunze kwemusoro wemabhini ekuchengetedza. Mavhiri mavhiri anogona kubata shanduko imwechete yehembe, mabhuku, magazini, uye chero zvimwe zvidiki zvinhu zvaungade kuenda nazvo mundege.
18 ″ - 20 ″ Takura-Pakutakura
Izvi zvinoonekwa seyenyika dzepasi rose kutakura-hukuru, sezvo ivo vachibvumidzwa sekutakura kune dzimwe ndege dzepasi rose. Iwo akanakira nzendo kwemazuva 1-2, sezvo vaine kurongedza nzvimbo yezvipfeko zvishoma, bhutsu, uye machira ekugezesa.
21 ″ - 22 ″ Takura-Mutoro
Aya ndiwo hukuru hunonyanya kufarirwa hwekutakura-mukwende wemuUS ndege dzendege. Ndege zhinji dzeUS dzinotakura zvibvumirano zve22 ″ x 14 ″ x 9 ″, kana makumi mashanu nemashanu inches. Aya ndiwo akakosha akakosha evafambi vebhizinesi kana nzendo dzekupera kwevhiki, sezvo zvidimbu zvakawanda zvehukuru izvi zvine folda kana ruoko runobviswa rwehembe rinobata sutu imwe kana rokwe uye ine nzvimbo yakakwana yekurongedza yezvipfeko zvishoma, shangu mbiri, uye zvekugezesa. Mazhinji zvakare ane yekuwedzera ficha, iyo inobvumidza yekuwedzera maviri kusvika mana masendimita emagetsi ekurongedza, asi kana akawedzeredzwa aya masayizi anogona kupfuura kutakura kwezvirambidzo uye zvinofanirwa kuongororwa.
23 ″ - 24 ″ Mudiki Wakaongororwa Mikwende
Aya saizi anozivikanwa kune vafambi vanotsvaga idiki, yakareruka sarudzo yemikwende yekutarisa. Izvi zvidimbu zvakakurisa kutakura kuenda nendege, asi zvakakwanira nzendo dzemazuva matatu kusvika mashanu. Kune nzvimbo yezvipfeko zviviri kusvika zvitatu, shangu mbiri, uye mateki echimbuzi. Muchengeti (akapeta kunze kana anobviswa sleeve yenguo) ane nzvimbo inokwana masutu maviri kana madhirezi.
25 ″ - 27 ″ Wakatariswa Mikwende
Aya saizi ndiwo akakosha saizi yemikwende yekutarisa. Iwo akakosha panzendo dzemazuva mashanu kusvika manomwe, kana kupfuura, zvinoenderana nemabatiro aunoita. Ivo vane hukuru hukuru hwezvakawanda zvipfeko, shangu, uye zvekugezesa. Muchengeti (akapeta ruoko kana ruoko runobviswa rwehembe) anogona kubata masutu makobvu makobvu uye kusvika kumadhirezi mana. Idzi ndidzo sarudzo dzakanakisa dzekutakura mukwende, vane nzvimbo yakawanda yekurongedza asi hautyore musana wako uchiedza kuifambisa.
28 ″ - 32 ″ Sutukesi
Aya masutukesi akakura kwazvo akaitirwa nzendo dzinopfuura vhiki. Vane chinzvimbo chakakura chechinhu chero chaunoda kufamba nacho. Nekuda kwehukuru hwavo hukuru, kana vakazara zvakazara vanogona kuve vakaoma kufambisa uye vanogona kupfuura makumi mashanu emakumi. kurema kurambidzwa kunoitwa nevakawanda nendege dzeUS. Pamwe pamwe nezvinorema uremu, ndege zhinji dzeUS dzine ganhuriro yehukuru hwemasendimita makumi matanhatu nematanhatu uye hukuru uhu hunogona kupfuura hukuru, kunyanya kana huchiwedzerwa Asi kana iwe uchiziva iwe kuti unoda chidimbu chikuru chemutoro chiripo, izvi zvingave zvako.